कसले फैलायो विजय शाहीको मृत्युको ‘फेक न्युज’ ? – MySansar
कसले फैलायो विजय शाहीको मृत्युको ‘फेक न्युज’ ?
Posted on July 28, 2021 July 28, 2021 by Salokya
मंगलबार एकाएक सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषय निकै चर्चामा आयो – विजय शाहीको मृत्यु। उनको मृत्यु भएको दावी गर्दै फोटोसहितको पोस्ट भाइरल भयो। सबैभन्दा पहिला युट्युबर भाग्य न्यौपानेले अद्‍भूत स्मरण शक्ति रहेको दावी गरेर चर्चामा ल्याएका उनी पछि राष्ट्रिय टेलिभिजनमा ऋषि धमलाको शोमा सम्म छाए। कर्णाली सरकारले पुरस्कारको घोषणा गर्‍यो। उनका दावीहरुको परीक्षणसम्म पनि नगरी उनलाई वाहवाह गरियो। केही समयअघिदेखि भने उनी हाँसोका पात्र बनाइएका थिए। उनका दावीहरु कसरी गलत छन् भनेर अमेरिकी नागरिक नेल्सन डेलिसले बनाएको भिडियो युट्युबमा आएपछि उनका अनेक मिमहरु बनेका थिए। यही क्रममा अचानक उनको मृत्यु भएको भन्दै फोटोसहितका पोस्ट सोसल मिडियामा भाइरल बनाइयो।
विजय शाहीको निधन भएको भन्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जलिसमेत लेखिएको पोस्ट उनका शिक्षक दीपकबहादुर शाहीले पहिलो पटक फेसबुकमा राखेका थिए। फोटोमा विजय शाही जस्तो देखिने व्यक्ति नाकमा कपास कोचेको अवस्थामा देखिन्थ्यो।
दीपक उनै व्यक्ति हुन् जो विजयका अङ्ग्रेजी शिक्षक भन्दै युट्युबमा चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीमा बोलेका थिए। उनले विजयको अङ्ग्रेजी राम्रो थियो भनेको भिडियो पनि यतिबेला भाइरल बनाइएको छ। दीपकले राखेको पोस्टपछि नै धेरैले त्यही फोटोसहित मृत्युको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
भाइरल भइसकेको यो पोस्ट तर दीपकले केही समयपछि हटाए। किन हटाए भनेर पनि उनले लेखेका छैनन्। उनकै पछि पछि लाग्दै विभिन्न फेसबुक पेजहरुले उनको मृत्यु भएको ‘कन्फर्म’ लेख्दै हाले-
फेसबुक पेजहरुमात्र होइन, आफूलाई फेसबुकमा पत्रकारका रुपमा चिनाएका अभिनन्दन बस्नेतले पनि ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जलि मित्र’ भन्दै विजय शाहीका फोटोहरु राख्दै उनको मृत्यु भएको बारेमा लेखे।
तर पछि उनले पनि यो पोस्ट डिलिट गरेका छन्। र, अर्को पोस्टमा ‘गलत जस्तो लाग्यो’ लेख्दै गलत प्रचार गर्नेलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। उनले पनि दीपकबहादुर शाहीलाई दोष पन्छाएका छन्।
त्यसैगरी फेसबुकमा विमला विकिरण नाममा लेखिएको कुरा त झन् अजिबकै छ। विजय शाहीको मृत्यु होइन, आत्मा चैँ टाढा गएको रे, शरीर सकुशल रहेको रे, भोलि बिहान दोस्रो जन्म हुने रे, अनि प्रहरीले मुचुल्का गरिरहेको दावीसहितको पोस्ट गरिएको थियो। पछि त्यो पोस्टलाई एडिट गरी ‘उसैले जे जे भन्यो त्यही लेखेको हो। यो बनाएर लेखिएको होइन’ लेखिएको थियो।
सुरुमा उसैले जे जे भन्यो त्यही लेखेको लेख्ने विमलाले पछि भने विजय शाहीले मृत्युको नाटक गरेर गम्भीर अपराध गरेको पो दावी गरे त।
विजय शाही घरमै
प्रमुख अनलाइन मिडियाहरुमा आएको कालिकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी शाहको भनाई र सुरुमा यो खबर फेसबुकमा राख्नेहरुले नै पछि हटाएका कारण उनको मृत्युको खबर मिथ्या रहेको देखिन्छ। विजय शाहीका निकटका मान्छेहरुले नै यो मिथ्या कुरा फैलाएको र मृत्यु भएको जस्तो गरी नाकमा कपास कोचेर उनको फोटो राखिएकोले उनको पनि यसमा मिलेमतोको शंका गर्न सकिन्छ। उक्त फोटो कुन प्रयोजनले कहिले खिचेको भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छैन। ‘डिभाइन पावर’ को गफ नेल्सनलाई दिए जस्तै र विमलाले लेखे जस्तै आत्माको दोस्रो जन्मको फन्दा गर्न त कतै यो कुरा फैलाइएको होइन?
यो बारेमा नेपाल फ्याक्ट चेकको तथ्य जाँच पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।